कार्गोकोलेक्टिभ के हो र किन मेरो पोर्टफोलियो त्यहाँ बनाउँछ? | क्रिएटिव अनलाइन
कार्गोकोलेक्टिभ के हो र म किन मेरो अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउने?
लुआ लौरो | | मा अद्यावधिक गरियो 27/02/2019 11:28 | वेब डिजाइन, सामान्य
कार्गोकोलेक्टिव यो एक छ अनलाइन प्लेटफार्म दृश्य विश्वसँग सम्बन्धित पेशेवरहरूको लागि वेबसाइटहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य: कलाकार, डिजाइनर, विकासकर्ता, फोटोग्राफर, आदि।
सिद्धान्तमा, यो एक निजी प्लेटफर्म हो जुन हामी प्रविष्ट गर्न सक्छौं (प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा) दुई पहुँच सडकहरू: पहिलो, एक मित्रको निम्तोमा जो पहिले नै यसको सम्बन्धित छ; र अर्को, कार्गोक्लेक्टिभ प्रबन्धकहरूलाई आफुलाई स्वीकार गर्न भन्दै.
केहि पोष्ट अघि मैले inv वटा निम्तो प्रस्तावें जुन कार्गोकोलेक्टिभबाट मलाई उपलब्ध थिए (हो, मसँग मेरो पोर्टफोलियो यो "उपकरण" को साथ सिर्जना गरिएको छ)। म यो भन्छु किनकि, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ र त्यो लेख भ्रमण गर्नुभयो भने, हुनसक्छ तपाईं ती मध्ये एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज त्यहाँ left वटा बाँकी छन् (सायद जब म पोस्ट लेख्न सक्दछु त्यहाँ कोही पनि बाँकी हुँदैन)।
कुराको लागि आउनुहोस् कार्गोकोलेक्टिभले मलाई के प्रस्ताव गर्दछ?
धेरै सफा र राम्रो डिजाइन, CSS र HTML परिमार्जन गर्न वा अन्य टेम्पलेटहरू स्थापना गर्ने सम्भावना।
अपग्रेडको सजिलो मेरो पोर्टफोलियो।
तपाईले चाहानु भएको डोमेनमा होस्ट गर्ने सम्भाव्यता (प्रो संस्करणको साथ)।
यहाँ कार्गोमा मेरो पोर्टफोलियो (शुद्ध र कडा स्वयं पदोन्नति, यसलाई ध्यानमा नलगाउनुहोस्)
र यो पढे पछि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि यसमा केही नयाँ छैन। एउटा प्लेटफर्म वा अर्कोमा निर्णय गर्नु सजिलो काम होइन, र यो सबै व्यक्तिपरक छनौट भन्दा माथि छ। के म टम्बलरमा मेरो पोर्टफोलियो बनाउन सक्छु? हो, यो सक्छ। मैले वास्तवमै प्रयास गरें, तर विश्वास भएन। तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ? डोमेस्टिकिका, वा Behance मा? हो, यो सक्छ। तर मलाई मन पर्यो व्यक्तिगत वेब उपस्थिति, एक समुदायसँग सम्बन्धित भएको भावना होईन (र रेकर्डको लागि मैले पनि तिनीहरूलाई प्रयास गरेको छु)। तपाईं यो WordPress मा गर्न सक्नुहुन्छ? हो, यो सक्छ। तर म देख्छु यो प्लेटफर्म ठूला परियोजनाहरुमा लक्षित छ। म WordPress को साथ काम गर्ने बानीमा छु र मलाई माथिको Cargocollective को बारे मा के मन पर्छ यो म कत्ति चाँडो सेक्सन अपडेट गर्न सक्दछु। र सुरक्षा प्लगइनहरू स्थापना गर्न आवश्यकता बिना नै ...
यदि तपाईंको लक्ष्य एक सुपर उपन्यास वेबसाइट सिर्जना गर्न हैन, जुन अनलाइन पोष्ट गर्न सकिन्छ र ओडवर्ड्स, सीएसएस पुरस्कार र अन्य भर्चुअल पहिचानका लागि मनोनयन गर्न सकिन्छ भने कार्गो राम्रो विकल्प हो। किनभने त्यो एक राम्रो पोर्टफोलियो कुञ्जीहरू तिनीहरू छन्:
ग्रिड खाली गर्नुहोस्, राम्रोसँग आदेश गरिएको सामग्री।
र पाठ्यक्रम: दुवै छवि र पाठमा धेरै सामग्री चयन गर्नुहोस् (कृपया झाडीको वरिपरि नजानुहोस्)।
कुन हो विपत्ति Cargocollective को?
नि: शुल्क संस्करणमा सीमितता: तपाईं अधिकतम १२ परियोजनाहरू र pages पृष्ठहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ (अधिकतम १०० MB)। १० डिजाईनहरू उपलब्ध छन्।
यी विपक्षहरूबाट बच्न, समाधान एक प्रो प्रयोगकर्ता बन्ने छ (तार्किक, सही?)
अब तपाईं यहाँ सम्म आउनु भएको छ, तपाईं आश्चर्य हुन सक्छ SEO को बारेमा के कार्गोमा। हामी ट्याग परिभाषित गर्न सक्दछौं जुन हामी हाम्रो पोर्टफोलियो र वर्णनसँग सम्बन्धित छ, जुन गुगल परिणामहरूमा देखा पर्नेछ। के तपाईं प्रत्येक परियोजनाको लागि एसईओ प्यारामिटरहरू परिभाषित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ ... छैन यो कार्गो विपक्षको अर्को हो। तर वास्तवमै ... तपाईलाई कसरी लाग्छ तपाईका क्लाइन्टहरूले तपाईलाई भेट्टाउँछन्? तपाईंको नाम र पेशाबाट खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, वा प्रोजेक्टको नामबाट?
मेरो महान सल्लाह यो हो कि तपाईंले ती सबैलाई एक एक गरेर प्रयास गर्नुहोस्। र एउटा तपाईलाई सबैभन्दा बढी विश्वस्त पार्ने बनाउनुहोस्। अन्त्यमा यो होइन कि त्यहाँ राम्रो वा नराम्रो प्लेटफर्म छ, तर एक जो सबै भन्दा राम्रो सूट गर्दछ तपाईंको आवश्यकताको लागि। तपाईं कुन प्लेटफर्म मन पराउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » कार्गोकोलेक्टिभ के हो र म किन मेरो अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउने?
तपाईका लेख धेरै राम्रो छ को लागी धेरै धन्यवाद
लुआ लौरो भन्यो
तपाइँलाई पढ्न को लागी धन्यवाद, जुआन :)
L Loua Louro लाई जवाफ दिनुहोस्
Maribelle ocegueda भन्यो
नमस्ते लुआ लौरो :) सिफारिसको लागि धन्यवाद, म निश्चित रूपमा कार्गोकोलेक्टिव मन पर्छ, मलाई त्यो मनपर्‍यो: «… तर मलाई व्यक्तिगत वेबसाइटको पक्ष मनपर्‍यो, समुदायसँग सम्बन्धित नभएको भावना»
के तपाईंसँग नि: शुल्क डिजाइनहरू उपलब्ध छन्? ...
म तपाइँको मैत्री जवाफ को लागि प्रतीक्षा गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद
Maribelle Ocegueda लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको शैली परिभाषित गर्नुहोस् भन्यो
नमस्कार! कार्गोमा मेरो लामो समयको लागि मेरो पोर्टफोलियो छ तर म एक भिडियो परिवर्तन गर्न कोशिस गर्दैछु र त्यहाँ कुनै मार्ग छैन। तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने व्याख्या गर्न आपत्तिजनक हुन्छ? म कार्गो समर्थनको चरणहरू अनुसरण गर्दछु तर कुनै तरिका छैन। धन्यबाद
तपाईंको शैली परिभाषित गर्न जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! माफ गर्नुहोस्, मेरो अज्ञानता, तर मैले कार्गोमा मेरो पोर्टफोलियो बनाए र अब मलाई यो नेटवर्कमा कसरी अपलोड गर्ने थाहा छैन :( मलाई कसैले मद्दत गर्न सक्दछ? धन्यवाद! धेरै धन्यबाद!
नमस्कार के कसैले मलाई चार्जमा आमन्त्रित गर्न सक्छ?
के तपाईंलाई सीएसएस जान्नु आवश्यक छ?
नमस्ते, के कसैको लागि स्थिति उपलब्ध हुन निमन्त्रणा छ?
र अर्को प्रश्न: एक प्रो खाताको एक डोमेन मा यो होस्ट गर्न सक्षम हुन को मूल्य के हो?
लिस्टरस्टरमा जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, के कसैले मलाई कार्गोमा आमन्त्रित गर्न सक्छ?
Josemmatotorres लाई जवाफ दिनुहोस्
विचारहरु ईन्धन भन्यो
हेलो, म तपाईले भनेको सबै कुराहरु संग सहमत छु (म कार्गो पनि प्रयोग गर्छु), तर मँ फरक छु कि एक ग्राहकले कहिले तपाईलाई प्रोजेक्टको नाममा खोज्ने छैन। मलाई लाग्छ कि धेरै चोटि यो काममा आउँदछ, उदाहरणको लागि जब कसैले टिभीमा अभियान देख्छ, पोष्टरको डिजाईन वा जुन पनि र यसलाई जान्छ कि कसले यसलाई केहि कमिसनमा राख्यो।
कुन कुराले हामीलाई थप दृश्यता दिन्छ जुन हाम्रो काम हो, त्यसैले हामी यसलाई सजिलैसँग भेट्टाउन सक्दछौं, के तपाई सोच्नुहुन्न? कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं बैंकिआ वेबसाइट बनाउनुहुन्छ, धेरै जसोलाई यो हेर्नका लागि कोहीले थाहा पाउँदैन कि कसले बनायो, तिनीहरू गुगलमा जान्छन् र उनीहरूले के भन्छन्, "बैंकिया वेबसाइट लेखक" वा "लोआ लुरो ग्राफिक डिजाइनर"?
कुनै समुदायसँग सम्बन्धित जस्तो, यस्तो समुदायमा दृश्यता हुनु राम्रो हो जसमा मानिसहरू एक पृष्ठबाट अर्को पेजमा एक्लै बस्नु भन्दा एकलै छ र कसैले पनि संयोगले हामीलाई देख्न सक्दैन ...
म कार्गोलेक्टिभमा छु, एह, रेकर्डको लागि, यसले अन्य प्लेटफर्महरूको रक्षा गर्नु हुँदैन (जुन मलाई थाहा छैन, वैसे पनि)।
अभिवादन र लेख को लागी धन्यवाद!
विचारहरु लाई उत्तर दिनुहोस्
फर्नाडा V भन्यो
नमस्कार, केहि हप्ता अघि मैले आफ्नो पोर्टफोलियो खोले, र म प्रो संस्करण खरीद गर्ने योजनामा ​​छु, मेरो प्रश्न हो, म केवल मेरो अंशको लागि डोमेन किन्छु, वा म HOST बाट पूर्ण प्याकेज पनि खरीद गर्छु र यसलाई पनि चार्ज गर्छु?
फर्नाडा V लाई जवाफ दिनुहोस्
एरिजोना मार्ले भन्यो
नमस्कार, त्यहाँ कार्गोबाट निमन्त्रणा प्राप्त गर्ने कुनै तरीका छ? धेरै धेरै धन्यवाद
एरिजोना मार्लीलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्गो एक पप हो। हुनसक्छ यो पहिले राम्रो थियो। अब सबैभन्दा खराब हो। तिनीहरूको वेबसाइटहरू ढिलो र पुराना छन्, र तपाइँ भुक्तान गर्नुहुन्छ र कुनै ग्राहक सेवा छैन। तपाईं तिनीहरूलाई ईमेल पठाउन सक्नुहुन्न, केवल "टिकटहरू" जुन उनीहरूले बेवास्ता गर्छन्। त्यहाँ एक हजार थप राम्रा र कम क्रिप्पी विकल्पहरू छन्।
हास्य पुस्तक मिथक: १ 1929 २ from बाट यात्रा (II)
हास्य पुस्तक मिथक: १ 1929 २ from बाट यात्रा (I)